एक दिनमा कति जनाले फेसबुक चलाउँछन् ? जानौँ फेसबुक बारेका नयाँ तथ्यहरु | KTM Khabar
२०७३ कार्त्तिक २० गते १२:०५ मा प्रकाशित
विश्वको सबैभन्दा ठूलो सोसल मिडिया वेबसाइट फेसबुक दिनहुँ कति मानिसले चलाउँछन् होला ? फेसबुकको कमाइ कति छ होला ? यो सायद चासोको विषय बन्न सक्छ ।
पौने दुई अर्ब भन्दा बढि प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकले हालै आफ्नो आय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा कम्पनीका प्रयोगकर्ताको तथ्यांक तथा अन्य सेवा तथा तथ्यहरुको खुलासा गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार हाल फेसबुकका सक्रिय प्रयोगकर्ताको संखया १ अर्ब ७९ करोड छ । सक्रिय प्रयोगकर्ता भनेको कम्तिमा महिनामा एक पटक फेसबुक चलाउने मानिसहरुको संख्या हो । फेसबुकका एक्टिभ युजर्सको संख्यामा वाषिर्क १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
फेसबुकका अनुसार ह्वाट्सएप र फेसबुक मेसेन्जरका सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या १ अर्ब नाघेको छ । त्यस्तै इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको संख्या ५० करोड छ । तथ्यांक अनुसार विश्वमा हरेक दिन १ अर्ब १८ करोड मानिसले फेसबुक चलाउँछन् ।
फेसबुक चलाउने मध्ये अधिकांसले फेसबुक चलाउन मोबाइल डिभाइस प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । हरेक महिना १ अर्ब ६६ करोड तथा हरेक दिन १ अर्ब ९ करोड मानिसले फेसबुकको मोबाइल एप प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
फेसबुकले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्यांकमा टिप्पणी गर्दै कम्पनीका सिइओ मार्क जुकरबर्गले भिडियोको महत्व बढ्दै गएको र फेसबुक लाइभ प्रयोग गर्नेको संख्या पछिल्लो मे यता ४ गुणाले वृद्धि भएको बताएका छन् ।